ရှင်ဒိသာပြာမုက် ၏ သံတမန် စကား
ဒေါက်တာသန်းထွန်း ၏ ဒိသာပြာမုက် ကျောက်စာ(၁၂၈၅) သမိုင်းမှာ အရေးပါပုံ
စစ်လန့်ပြီးပြေးပုန်းကြလို့ ပုဂံမှာ လူသူမရှိ။ ဒါကြောင့် သာသနာပြုစရာ လူမရှိ။ (ပုဂံပြည်သူတွေကလဲ တကယ်ကတာ့ ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးဖြစ်လို့ သာသနာပြုကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရန်မလို) ဒါကြောင့် မောင်ဂိုဧကရာဇ်က သူတို့ကို ကိုယ့်ကျောင်းကိုယ် ပြန်ခွင့်ပြုပါလို့ ပြောပေးစေချင်တယ်။
သင်းတွယ် (တကောင်း)က ခရီးဆက်ပြန်တော့ ယဆည် (? Yuchi, Lote’u district) ကို ရောက်တယ်။ ဝါဆိုချိန်ကြုံကြိုက်ပြန်လို့ ဝါဆိုနေရတယ်။ ဝါကျွတ်(နိုဝင်ဘာရောက်) မှ ခရီးဆက်ရပြီး တယ်တု (T’ai-tu, … anbaliq၊ ဧကရာဇ်နန်းစိုက်ရာ မြို့တော်) ကို ပြာသို (ဒီဇင်ဘာ) မှာ ရောက်သွားမယ်။
တရုတ်မင်းရှေ့တော်ဝင်ရတယ်၊ သူမေးချင်တာ မေးတာကိုပဲ ဖြေရတယ်။ တိုင်းရေးပြည်ရေး မဆွေးနွေး ရပါ။ နောက်မှ တိုင်းရေးပြည်ရေး ပြောရတယ်။
ပဏ္တိတ် အခုလွတ်တဲ့ လူတစ်သောင်းနဲ့ သံဃာတွေက သာသနာပြုဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတော့ (ဘုန်းကြီးက) အရှင်မင်းကြီး စစ်သည်နဲ့ ရဟန်းတွေ စေခိုင်းတဲ့ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ (စားစရာ) စပါး ရှိမှဖြစ်မယ်၊ နိုင်ငံမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာက စပါး ဖြစ်ပါတယ်။
စားစရာ (ဆန်) မရှိရင် ထန်းကိုစင်းပြီးသာ စားကြမယ်ဆိုရင် ဝမ်းသွားပြီး သေဖို့သာ ရှိပါတယ်။
တောကိုပြေးတဲ့ ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူလဲ မြို့တော်ကို ပြန်ဝင်ပါစေ။ တောမှာကြာရင် သေကုန်မယ်၊ အခုအတိုင်း အရှင်မင်းကြီး အလိုဆန္ဒ မပြည့်နိုင်ပါ။
ဥယျာင်စိုက်သူဟာ သစ်ပင်တွေရှင်သန်အောင် ရေလောင်းရပါတယ်။ အသီးအပွင့်ရှိပြီဆိုမှ ခူးစားနိုင်ပါတယ်။
အခုလဲ တိန်ပြာတိတ် (? တမ္မဒီပ) ကို ရေးလောင်းပါ။ ဒီနိုင်ငံဟာ ငယ်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ (ဗုဒ္ဓသာသနာ) ထွန်းကားရာဖြစ်လို့နှစ်သက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
အဖ ဂေါတမ ဘုရားသာသနာတည်ရာကို မပျက်စေရ၊ အရှင်မင်းမြတ်ပိုင်နက် ကြီးမားတာနဲ့စာရင် ဒီတိုင်းပြည်ကလေးက အင်မတန်သေးငယ်ပါတယ်။
မင်းကြီးက နှစ်သက်ကြည်ဖြူစွာ ကူညီပါမှ သာသနာ ဆက်လက်ထွန်းကားမှာ ဖြစ်လို့ စစ်သားတွေလွတ်မယ့်အစား စစ်သားတွေကို ရုပ်သိမ်ပြီး လူတွေကို ကောက်၊ ပဲစိုင်ခွင့်ပေးပါ။ ကောက်၊ ပဲ ဖြစ်ထွန်းပြီဆိုရင် မင်းကြီးကလာပါတော့ လို့ ပြောတဲ့အခါ
တရုတ်မင်းကြီးက …"ဤစကာတွင် ငါဖိုဝ်လေ၏၊ ပဏ္တိတ်လာရုယ် ပ္လိယ်ပ္လိယ်သသျှင် တိုဝ်ကိုဝ် ခဝ်လိယ် ကောက်ငယ်လေ စိုက်လိယ်။ ပြီပီသော ငါကိုဝ် လွတ်လတ်တုံ(ပုံ ၂၇၁၃၃-၃၄)"
ဒီစကားရတော့ ရှင်ဒိသာပြာမုက် ပုဂံကို ပြန်ခွင့်ရတယ် (ငြိမ်းချမ်းရေး ရပြီပေါ့)။
ပုဂံမင်းကြီးက ကျေးဇူးတင်လို့ ဘုန်းကြီးကို မြေပယ် ၄၀၀ (၁၁၀၀ ဧက၊ ၄၄၅.၅ ဟက်) ကို ကြံတု (မုံရွာ အမြင့်အနိမ့်နယ်) က အစွတ်အခြောက်စိုင်ခင်းတွေနဲ့တကွ ကျွန်၊ ကျွဲ၊ နွားလဲပေးတယ်။ ဒါတွေအားလုံး ကို ဘုန်းကြီးက ရတနာသုံးပါးနဲ့ ပန်းပွတ်ရန် စေတီကို လှူပါတယ်။
Posted by Philip Shield at 1:45 PM
မြန်မာ့ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ မြန...
စိတ်နေစိတ်ထား မှန်မှ ဥပုသ်ရပါတယ် ဆပ်ပြာတော့ တိုက...
FREE IELTS Listing Practices In order to practice...
အသိပေးစကားစုများ (ဓမ္မဒူတအရှင်ဆေကိန္ဒ ) “ငါအတော်ဆ...
Gmail Paper A New ButtonNow in Gmail, you can re...
ရှင်ဒိသာပြာမုက် ၏ သံတမန် စကား ဒေါက်တာသန်းထွန်း ၏ ...